Home > Edu > Software Engineering Courses
Computer Programming ကို စတင် လေ့လာလိုသုများအတွက် Programming ၏ အခြေခံ သဘောတရားများကို အချိန်တိုအတွင်း လက်တွေ့ကျကျ သင်ကြားပေးမည့် အကောင်းဆုံး သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
Microsoft.Net Framework ဖြင့် C# Windows Application Developer တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်မည့်သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက KMD မှပေးအပ်သော Software Engineering Certificate သာမက KMD နှင့် Microsoft မှ ပူးပေါင်းပေးအပ်သော Querying Microsoft SQL Server 2012 (70-461) သင်တန်း ပြီးဆုံးကြောင်း Certificate ပါရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Web နည်းပညာ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာချင်သူများ၊ Web ဒီဇိုင်းဖန်တီးချင်သူများ နှင့် Web ဒီဇိုင်နာအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ချင်သူများ တက်ရောက်ရန် အထူးသင့်လျော်သော သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။
Python သည် High level programming Language တစ်ခုဖြစ်ပြီး လေ့လာ သင်ယူရတာ မြန်ဆန်သော Programming Language တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် Operation System ဠ်မဆို develop လုပ်နိုင်ပြီး အလွန်ပေါ့ပါးစွာ run နိုင်သော programming တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။ Programming စတင်လေ့လာသူများအတွက် လွယ်ကူသော programming language ဖြစ်ပြီး programming basic လေ့လာထားသူများအတွက် အရမ်းလွယ်ကူသော programming တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Python programming course သည် Python programming language ၏ အခြေခံသဘောတရားများသိရှိပြီး Assignment များကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားနိုင်ပါမည်။ Object Oriented Programming သဘောတရားများသိရှိပြီး Python with MySQL database ကို အသုံးပြု၍ practical project ကို မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
01. Introduction 02. Variable 03. Strings 04. Collection 05. Condition 06. Iteration 07. Function 08. Object and Class 09. Modules 10. Exception 11. File Input/Output 12. Graphical User Interface 13. MySQL 14. Python with MySQL 15. Practical Project
Open Source Language တစ်ခုဖြစ်သည့် PHP အား အသုံးပြု၍ Dynamic Web Application များ ရေးသားနိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် Web Developer အဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် သင်တန်းပြီးဆုံးပါက မိမိကိုယ်တိုင် Web Application များရေးသားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။